Nagano Prefecture - အကောင်းဆုံးဆွဲဆောင်မှုများနှင့်လုပ်ရန်အရာများ >
ကျေးဇူးပြု. ရည်ညွှန်းပါ the official tourist site of Chino City အသေးစိတျအဘို့။
ဓါတ်ပုံများ - တောင် ဖူဂျီသည်ဆီးနှင်းများဖုံးလွှမ်းနေသည်
ဂျပန်ပြီလ! နှင်းဖုံးရှုခင်း၊ ချယ်ရီပွင့်များ၊
Aomori စီရင်စု! အကောင်းဆုံးဆွဲဆောင်မှုများနှင့်လုပ်ရန်အရာ
ဓာတ်ပုံများ - ဂျပန်ချယ်ရီပန်းပွင့်ခြင်းကိုအပြည့်အဝခံစားရန်သော့ချက်စာလုံး ၁၁ ခု
2019 Japan Cherry Blossom ခန့်မှန်းချက် - အနည်းငယ်စော။ သို့မဟုတ်ပုံမှန်နှင့်အတူတူဖြစ်သည်
ဂျပန်မှာမေမေ! အကောင်းဆုံးရာသီ။ တောင်များသည်လည်းလှပသည်!
ဂျပန်မှကြိုဆိုပါသည် လှပသောဓာတ်ပုံ ၆၀ ကိုခံစားပါ။
ဓါတ်ပုံများ - အိုကီနာဝါ၏လှပသောပင်လယ်ရေ ၁ - အဆုံးမဲ့ရှင်းလင်းသောရေကိုခံစားပါ